Missed abortion - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Missed abortion ဆိုတာ… ကိုယျဝနျဆောငျအမြိူးသမီးအနနေဲ့ မိမိကိုယျဝနျပကျြကတြယျဆိုတာ မသိလိုကျဘဲ… မိနျးမကိုယျကနေ သှေးဆငျးတာ၊ ဆီးစပျကိုကျတာတှမေဖွဈဘဲနဲ့ သားပကျြသားလြှောခွငျးကို ချေါတာပါ…. ကိုယျဝနျပထမ သုံးလနဲ့ ဒုတိယ သုံးလ မှာ ဖွဈနိုငျသျောလညျး အဖွဈအမြားဆုံးကတော့… ကိုယျဝနျပထမသုံးလမှာ ဖွဈပါတယျ….
Missed abortion လို့ ဘယျလိုအခြိနျမှာ သတျသမှတျသလဲဆိုရငျ… သှေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုယျဝနျရှိခြိနျမှာထုတျတဲ့ hCG လို့ချေါတဲ့ ဟျောမုနျးဓာတျက ဖွဈသငျ့သလောကျတကျမလာတာ…. အာလျထရာဆောငျးမှာ ကွညျ့လိုကျရငျ ဗိုကျထဲမှာ သန်ဓသေားလောငျးမရှိတာ…. ဒါမှမဟုတျ သန်ဓသေားလောငျးမှာ နှလုံးခုနျနှူနျးမရှိတာ မြိူးတှနေဲ့ သတျမှတျပါတယျ…
ရိုးရိုး ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးတှဟော…. သှေးဆငျးတာ၊ ဒါမှမဟုတျ ကလေးအသားစတှေ အပိုငျးအစတှဆေငျးတာ စတဲ့ လက်ခဏာမြိူးတှပွေတတျပါတယျ…သို့ပမေယျ့ တိတျတဆိတျ ကိုယျဝနျပကျြခွငျးမှာတော့ သှေးဆငျးတာ၊ ဒါမှမဟုတျ အရညျကွညျဆငျးတာလောကျပဲရှိပွီး ကလေးအပိုငျးအစတဈသြူးတှဆေငျးတာမြိူးမရှိပါဘူး…. ကလေးဟာ ဒီလိုလက်ခဏာတှမေပွမီ ရကျသတ်တပတျအနညျးငယျကတညျးက သဆေုံးခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ…
ရိုးရိုး ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးနဲ့ တိတျတဆိတျ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးကို ….. ခှဲခွားခငျြတယျဆိုရငျတော့ အာလျထရာဆောငျးရိုကျတာ… ကလေးနှလုံးခုနျသံမရှိတာ…သှေးစဈတာ တှနေဲ့ ခှဲခွားနိုငျပါတယျ…
တိတျတဆိတျ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးကို ကုသမှူ နညျးလမျးသုံးခုရှိပါတယျ….
ဆေးပေးကုသတာ ခွဈထုတျတာတှမေလုပျဘဲ…. သဘာဝအတိုငျး ထားလိုကျတာမြိူးဖွဈပါတယျ..
သားအိမျခေါငျးအဝကို ခြဲ့ပွီး အကွှငျးအကနျြတှကေို စငျအောငျ ခွဈထုတျပဈတာဖွဈပါတယျ
မိနျးမကိုယျထဲကို သားအိမျပှငျ့ဆေးပေးပွီး သားအိမျကို ညှဈစပွေီး သားအိမျထဲက ကလေးပစ်စညျး အကွှငျးအကနျြတှေ ကို တဖွညျးဖွညျး ထှကျသှားစတေဲ့နညျးလမျးဖွဈပါတယျ
Missed abortion ဆိုတာ… ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိူးသမီးအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆိုတာ မသိလိုက်ဘဲ… မိန်းမကိုယ်ကနေ သွေးဆင်းတာ၊ ဆီးစပ်ကိုက်တာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ သားပျက်သားလျှောခြင်းကို ခေါ်တာပါ…. ကိုယ်ဝန်ပထမ သုံးလနဲ့ ဒုတိယ သုံးလ မှာ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အဖြစ်အများဆုံးကတော့… ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
Missed abortion လို့ ဘယ်လိုအချိန်မှာ သတ်သမှတ်သလဲဆိုရင်… သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာထုတ်တဲ့ hCG လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်က ဖြစ်သင့်သလောက်တက်မလာတာ…. အာလ်ထရာဆောင်းမှာ ကြည့်လိုက်ရင် ဗိုက်ထဲမှာ သန္ဓေသားလောင်းမရှိတာ…. ဒါမှမဟုတ် သန္ဓေသားလောင်းမှာ နှလုံးခုန်နှူန်းမရှိတာ မျိူးတွေနဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်…
ရိုးရိုး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းတွေဟာ…. သွေးဆင်းတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးအသားစတွေ အပိုင်းအစတွေဆင်းတာ စတဲ့ လက္ခဏာမျိူးတွေပြတတ်ပါတယ်…သို့ပေမယ့် တိတ်တဆိတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းမှာတော့ သွေးဆင်းတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အရည်ကြည်ဆင်းတာလောက်ပဲရှိပြီး ကလေးအပိုင်းအစတစ်သျူးတွေဆင်းတာမျိူးမရှိပါဘူး…. ကလေးဟာ ဒီလိုလက္ခဏာတွေမပြမီ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကတည်းက သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်…
ရိုးရိုး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းနဲ့ တိတ်တဆိတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကို ….. ခွဲခြားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အာလ်ထရာဆောင်းရိုက်တာ… ကလေးနှလုံးခုန်သံမရှိတာ…သွေးစစ်တာ တွေနဲ့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်…
တိတ်တဆိတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကို ကုသမှူ နည်းလမ်းသုံးခုရှိပါတယ်….
ဆေးပေးကုသတာ ခြစ်ထုတ်တာတွေမလုပ်ဘဲ…. သဘာဝအတိုင်း ထားလိုက်တာမျိူးဖြစ်ပါတယ်..
သားအိမ်ခေါင်းအဝကို ချဲ့ပြီး အကြွင်းအကျန်တွေကို စင်အောင် ခြစ်ထုတ်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်
မိန်းမကိုယ်ထဲကို သားအိမ်ပွင့်ဆေးပေးပြီး သားအိမ်ကို ညှစ်စေပြီး သားအိမ်ထဲက ကလေးပစ္စည်း အကြွင်းအကျန်တွေ ကို တဖြည်းဖြည်း ထွက်သွားစေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်